M/weyne Faroole oo shir xog warran & wadatashi ah la yeeshay Issimada beesha Absame ee ku sugan Nairobi. – Radio Daljir
Nairobi, Nov 15 – Waftiga M/weynaha Puntland C/raxmaan M. Faroole ee ku sugan Nairobi ayaa shir xog warran iyo wadatashi ay la yeeshay Issimada, indheergaradka, cuqaasha iyo bulshada rayadka ah ee beesha Absame ee ku sugan Nairobi.
Waftiga Puntland ayaa ugu horayn ka xog waramay 5 nin oo la sheegay in ay ka tirsan yihiin jabhada ONLF, dhawaanna lagu qabtay Puntland, loogana shakiyey in ay falal-dambiyeed faraha kula jireen markii la qabtay, sidaa darteedna loo xiray.
Waxbixinta ayaa intaas ku dartay in 4 ka mid ahi ay hadda ku xiran yihiin xabsiyada Puntland, halka mid ka mid ahi uu u dar Alle ugu dhintay xabsiga.
Waftiga ayaa sidoo kale sheegay in ay dhinacooda raali galin ka bixinayaa wixii dhib ah ee ay beesha Absame ka tirsanayso ardaayada dega Puntland.
Labada dhinac ayaa isla gartay in aanay waxba ka jirin dacaayadaha iyo beenta la faafiyey ee ah in Puntland ay u gacan galisay Ethiopia dad loo qabtay in ay ka tirsan yihiin jabhada ONLF.
Gabagababdii shirka ayaa la isla qaatay in si midaysan looga hortago dadka falal-dambiyeednaya faraha kula jira ee dhib mooyee aan dheef kale u lahayn bulshooyinka ku nool Puntland, iyo Somali Galbeed (dhulka Somaliyed ee Ethiopia).
Waxaa la isku af-gartay in Issamada Absame ay booqasho ku tagaan Puntland.
Waxaa kale oo la isla gartay in ciddii dambe ee looga shakiyo in ay ka tirsan yihiin ONLF loo gacan galiyo maamulka Somali Galbeed, ama lagu xiro Puntland.
Waxaa todobaadadii la soo dhaafay la faafiyey in dad u dhashay Somali Galbeed oo lagu qabtay Puntland loo gacan galiyey Ethiopia, halka qaarna lagu laayey xabsiyada Puntland. Wararkaas ayaa ay cadaatay in ay ahaayeen been iyo dacaayad aan raad lahayn.